Ka xiriirka jidhka aluminium ee daahida safarka ee ku saabsan ee u soo guuray ee u soo guud aasaasiga ah - China Boeggeer
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Taah>Dadka xiriirka jidhka ah ah
Dadka xiriirka jidhka ah, waxaa laga sameysaa dadyada alumiinium oo la xidhiidheysa jidhka ah. Sidoo kale waxaannu ognahaa qaarka aluminium waa fudud, dib uu la xiriira, sii daaxiyo, wuxuuna ku yaalaa dhibaato. Taasu waa in daahka xiriirka xiriirka sidaas oo wanaagsan ah ee dabka ah iyo hantiyo wanaagsan. Dadka xiriirka jidhka la xiriirta ah wuxuu ka heli karaa badbaadada qaar ah. Sidaasoo kale shahaadada jidhka ah ayaa ka jeedsan kartaa biyaha cusbooyin, kuwaas oo kaa siiyaa daahir. Waxaad sidoo kale ku heli kartaa midho kala duduwan, waxaad dooran kartaa midib kasta oo sidii heshiiska shirkadda. Manfacyadan darteed waxaa kugu habboon isticmaala guryaha, hoteelyada, alaabta. Xarunta duufka iyo meelo kale.
Isku xirfadda ah
CLC-02 Isku xiriirka shirkada
Magaca dhaqaalaha: daahirka xiriirka.
L biirka: dadyada aluminium.
L Midibaha: lacagta lacag, madow, cacag, buluug, ee u gaadha, u gacan, gudub, dahabka, madol iyo midibaha kale.
L wacadeyn: 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm ama codsigaada.
I Hook sawr: 9 mm ama 12 mm.
I Hook, 17 mm, 20.4 mm, 22.5 mm, 24 mm.
Caadka: 0.8 m × 2 m, 0.9 m × 1.8 m, 0.9 m × 2 m, 1 m × 2 m, 1 m × 2.1 m.
Xafiiska: waxaa sidoo kale sidii aad u baahantahay.
Isku xiriirka xiriirka xiriirka ee CLC-03 CL
L warqada saaxiilka ah.
I miyoon fudud iyo dhinaca leh.
Waxaan u fududayn in la xiriirayo.
Adduun, dab aan dambeyn.
Waxaan fiican u fiican in lacagta.
Isku xiriirka caadiga ah - laaban dhinaca laaban.
Waxaan iskaga jeedaa shilka ah oo aad u fiican.
Waxaan ku heli karaa midibo kala duduwan.
Daryeelka dhaqaalaha ee anodized ayaa muuqada wanaagsan iyo saameyn yar ah.
Siiyadda siiyadda waxaa loo isticmaalaa sida:
Waxaan u dhigaa derbiga.
I qeybta gudaha.
Waana hoos la'aan.
Sidaas daraaddeed daahirka la xiriirta qalabka:
Dadka jidhka la xiriirta daad ah ee goobta lagu jeedaa
Daahka xasalta ku jeedaa daaqada
Qofka lagu xidhiidha daah
Dadka xiriirka xiriirka ee daboolka ah oo lagu codsadaa.
Dadka lacagta lacagta ah ee goobta ka sameysaa goobta cuboid
Dadka xarxada lagu xidhiidha
Waxaan ku gelaaa daahka jidhka ku heshiisaa boqolka booska ah, haddaba baaxayga booska booska.
Shahaadada goobta ee goobta ah ee goobaha biyo ah ama filim boolista, iyo xiriirka xiriirka xiriirka ee daadka ah oo ku yaal karton ama xaaladaha carruurta ah.
Dadka xiriirka jidhka ah ee filimiga booska lagu daboolaya
Kaartooyinka qaarkood waxaa isku dhamaada
Darteedka daahirka xidhiidhka xidhiidhka waxaa ku jira saddex jid kala dudubooyinka lagu sameeyo shahaadada jidhka. Rugta waxaa lagu gaadhaa xirfadeed, qaar kale waa goobta goobaha. Shaqooyinka goobta waxaa ka mid ah goobta shabakadda U iyo goobta H. Dhammaan waxay u fududsan birta ee birta daran. Saddexda shirkad oo aad u fudud waa goobta ah. Haddaba u baahan yar dabood ah derbiyada ama goobta ah, markaasna daahida ku rid.Dadka:
Daahda jidhka la xidhiidha jidhka ah oo ku taal salka.
Diyaasha daadka xiriirka ee ku taal derbiga
Midhoo kala duduwan ee daahida jidhka ah ee xiriirka ee tareeda
Dabooyin kala duduwan ee daahida xidhiidhka H
Ka dambe :Dadka ee shubka
Shaqada jidhka ah waa safarka ee uu aqoonsan oo kale ee barashada ee balaha, alaablaha, caafimaad iyo iibsashada, Labada shaqaalaha ee dadweynaha ee ku saabsan, haddii ay uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu...
Guribka ee baahan ee baahan
Waxaa u sameystaa isticmaalaa bidix iyo midigta oo ku xidhiidha usha la xidhiidhay oo la xidhiidhay, si uu u sameyso dabka ah oo toos codsashada. Dadkaasu wuxuu ka heleysaa xafiiska “B”.B = laqabta ba...
Dibixinta ee Aluminiuma
Sidoo kale daad ee silsiladka aluminium waxaa loogu yeedha daahda jidhka ah, safarka birta ah. Waxaa laga sameysaa 100% alaabta alumiinium, kaasoo la yihiin cilmiga sare. Birta alumiiniumka waa fudud,...